स्थिर ब्रोकर कमिसन कहिले सम्म ? - Lagani News
Home Share स्थिर ब्रोकर कमिसन कहिले सम्म ?
Published: Thursday, September 27, 2018 2018-09-27T22:03:00-07:00
Santosh Raj Bajgain September 27, 2018 Share,
लगानीन्युज/काठमान्डौ: सन् १९७५ मे १ मा अमेरिकाको शेयर बजारमा करिब १८० वर्ष पछि नयाँ युगको सुरुवात भयो । यो मानेमा नयाँ युग थियो की त्यस दिन भन्दा पहिला त्यहाँका ब्रोकरहरुले नेपालको जस्तै जस्तै स्थिर ब्रोकर कमिसनमा काम गर्थे। लगानीकर्ताहरू आफ्नो कारोबारको राम्रो रकम ब्रोकर कमिसनमा खर्चिनु पर्थ्यो।
अमेरिकामा मे १, १९७५ देखि ब्रोकरले लिने कमिसन अब स्थिर नहुने भयो। अब भने ब्रोकर र लगानीकर्ताको आपसी सम्झौता अनुसार ब्रोकर कमिसन निर्धारण हुन थाल्यो। यस कदमको विरोधमा स्टक एक्सेंज र ब्रोकरहरुनै लागेका थिए भन्ने सुनिन्छ तर जित अन्त्यमा लगानीकर्ता कै भयो।
नेपालमा भने उही पुरानो ब्रोकर कमिसनको मोडल लादिँदै आएको छ। अहिलेको समयमा ब्रोकर कमिसनमा धितोपत्र बोर्डले एउटा निश्चित क्याप लगाएर त्यो भन्दा मुनि खुला प्रतिस्पर्धा छोडिनु पर्छ। लगानीकर्ता र ब्रोकरको आपसी समझदारीमा ब्रोकर कमिसन तय हुनु पर्छ।
केही वर्ष पहिले ठुला तथा संस्थागत लगानीकर्ताले ब्रोकर कमिसनमा केही छुट पाउँदै आएको हल्ला बजारमा सुनिन्थ्यो तर आधिकारिक रूपमा पुष्टि भने भएको थिएन। यदि त्यो सत्य थियो भने धेरै प्रश्न खडा हुन्छन।
पहिलो प्रश्न : " किन केही निश्चित समूहले यो सुविधा पाउने ?
दोश्रो प्रश्न : "सबै साना ठुला लगानीकर्तालाई ब्रोकर कमिसनमा प्रतिस्पर्धा गर्न किन नदिने? के यो शेयर बजारमा साना लगानीकर्ताले केही सहुलियत पाए संसार सकिन्छ र ?
प्रतिष्पर्धी कमिसन ल्यानु अघि ब्रोकरलाई वर्गीकरण गर्नु पर्ने :
ब्रोकर कमिसनलाई खुला प्रतिष्पर्धामा छोड्नु अघि ब्रोकरलाई वर्गीकरण गर्न आवश्यक छ। सामान्यतः डिस्काउन्ट र फुल सर्भिस ब्रोकर गरी दुई थरीका ब्रोकर हुन्छन्।
डिस्काउन्ट ब्रोकरले थोरै कमिसनमा काम गर्छन् र सेवा सुविधा निकै कम दिन्छन् भने फुल सर्भिस ब्रोकरले धेरै ब्रोकर कमिसन लिन्छन् र सेवा सुविधा बढी दिन्छन्।
निश्चित पुँजी र पूर्वाधार पुरा गर्ने ब्रोकरलाई पोर्टफोलियो व्यवस्थापन, परामर्श, रिसर्च जस्ता आधुनिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन दिनु पर्दछ।
लगानीकर्तालाई धेरै फाइदा :
यसरी ब्रोकरको वर्गीकरण र ब्रोकर कमिसन खुला रूपमा छोडिने हो भने पक्कै पनि लगानीकर्तालाई फाइदा हुने नै छ। लगानीकर्ताले राम्रो सुविधा पाएको ब्रोकरमा गएर धेरै कमिसन तिर्न पनि तयार हुने छन् भने धेरै सेवा सुविधा नभएको ब्रोकरमा थोरै कमिसन तिर्ने छन्। धेरै सुविधा नपाउने ब्रोकरकोमा लगानीकर्ताले निकै सस्तो शुल्कमा नै कारोबार गर्न पाउने छन्।
ब्रोकर आफैलाई दिर्घकालीन फाईदा :
अहिले नेपालीले पाएको ब्रोकर सर्भिस भनेको निकै दशक अघिको ब्रोकर सर्भिस हो। आधुनिक पुँजी बजारमा शेयर ब्रोकर कहिले पनि कारोबारमा सीमित हुँदैनन्। खुला ब्रोकर कमिसनबाट प्रतिस्पर्धा बढ्ने र लगानीकर्ताले पाउने सेवा सुविधा विकास गर्न ब्रोकरले कुनै कसर छोड्ने छैनन्, यसले गर्दा झनै ब्रोकरलाई समय अनुकुल नयाँ प्रविधिमा बाँधिन बाध्य बनाउने छ जसले गर्दा धितोपत्र व्यवासयले दीर्घकालीन लाभ पाउने नै छ।
By Santosh Raj Bajgain - September 27, 2018